Uber dia horaisina ho Taxi raha jerena ny fameperana ny fifamoivoizana | Vaovao momba ny gadget
Mirongatra ny Madrid, ary ny tena zava-misy dia ny fitomboan'ny fepetra henjana amin'ny fivezivezena fiara izay apetraky ny mpitantana ny Carmena dia miteraka blister mihoatra ny iray. Na izany aza, baikon'ny mpitsara mifanditra - laharana faha-10 an'ny Madrid dia nanome baiko ny fampiatoana ireo fepetra napetraka izay tsy mamela ny fiara toy ireo nampiasaina tany Uber na Cabify hitety tao Madrid. Amin'izany fomba izany, ny toe-javatra iainan'ireo fiara ireo dia manomboka mitovy lenta, izay mandray anjara amin'ny fampihenana ny fandotoana ary maneho fomba vaovao iray ahazoana ny fitaterana mpandeha an-tanàn-dehibe.
Amin'izany fomba izany, ny didy dia miantso ny mpanatanteraka hamela ny fivezivezena fiara voahofa miaraka amin'ny mpamily, amin'ny teny mitovy amin'ny fahazoana mivezivezy amin'ny taxi. Io alakamisy io ihany no nanoloran'i Unauto ny fanoherana ny didim-panjakana Carmena. Amin'izany fomba izany, ny fiara miaraka amina mpamily tsy miankina iray dia ho afaka hiparitaka any Madrid tsy an-kanavaka, araka ny itiavantsika azy na tsia, izy ireo dia manao asa fanoherana ny fandotoana mitovy amin'ny an'ny taxi rehetra, ankoatry ny rafitra fanangonana sy fandraharahana. . Noho izany, ny Didy dia voajanahary amin'ny tontolo iainana, ary ny rafitra toy ny Uber na Cabify, izay miasa mitovy, dia tsy azo saziana amin'izany.
Tsy vao sambany i Carmena no nanandrana nanindry an'i Uber sy nifanaraka tamin'ny sendikan'ny mpamily fiarakaretsakaEfa nanao izany tamin'i Gran Vía, rehefa namela ny mpamily fiarakaretsaka handalo fa tsy Uber. Tamin'izany fotoana izany dia mpitsara iray hafa ihany koa no nilaza fa tsy nahita antony hamerana ny famerana ny fivezivezena any Gran Vía mankany Uber izy fa tsy ho an'ireo mpamily fiarakaretsaka mahazatra, satria ny tanjon'ny fampiharana ilay asa dia mitovy. Raha fintinina dia manao làlana ny ho avy tsy misy antony ara-politika hampiatoana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Uber dia horaisina ho Taxi manoloana ny famerana ny fivezivezena ao Madrid
Ireto ny lalao PlayStation Plus amin'ny Janoary 2017